အကောင်းဆုံး Float Air Trap ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး Float Air Trap ကိုရှာဖွေရန်။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ဟာအဓိကထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ် Float Air Trap။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေး, စတိုင်, နည်းပညာ, နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီရရှိနိုင်မှသာအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ, အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများ, နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုအသုံးပြုပြီးအောင်မြင်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားကြလျှင်, ငါတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု price.Our အရည်အသွေးကောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူနိုင်ငံခြားစျေးကွက်ရန်သင့်အားထိုထုတ်ကုန်များကိုအာမခံချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်လွတ်မြောက်ပါကနိုင်ငံအတော်များများမှဖောက်သည်များကတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
ပုံစံ - ALL STAINLESS STEEL No. FS2A SERIES
DSC အားလုံးသံမဏိ FLOAT အမျိုးအစား AIR ထောင်ချောက်
●CAST သံမဏိကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,
●DSC FLOAT TYPE AIR ထောင်ချောက်များသည်ဖိအားပေးသောလေထုမှလည်းကောင်း၊ ဆီမပါရှိသေးသည့်နေရာများတွင်ဓာတ်ငွေ့စနစ်မှလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/float-air-trap-3.html